Libanona: Lohataona, Zavakanto sy Zava-manahirana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2017 17:32 GMT
(Marihina fa tamin'ny 26 marsa 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra amin'ny teny anglisy)
Ao Libanona, manomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ny 21 Martsa ny lohataona. Izany no mahatonga ny 21 Martsa ankalazaina ho Andron'ny Reny ao. Mirona handefa lahatsoratra momba ny fitiavana, ny natiora sy ny masoandro miposaka ny bilaogera, maneho taratra ny toe-po be fanantenana amin'ny ankapobeny. Na dia mitady ho drafitra, paikady na fanadihadiana momba ny fanatsaran-javatra kokoa aza ny lahatsoratra ara-politika. Nanangona santionany tamin'ireo roa ireo aho ary araka ny mahazatra, santionany ihany izany. Mbola marobe ao, saingy tsy ahafahana mitanisa azy rehetra ny toerana sy ny fotoana.
Andeha hatomboka amin'ireo bilaogera izay nandefa sary nandritra ny dian'izy ireo tany Libanona Atsimo:
McDara nandefa lahatsoratra an-tsary momba ny diany tany Libanona Atsimo. Hita ao ambony ny iray amin'ireo mpaka sariny. Adiamondinsunlight izay nankany Atsimo ihany koa ary niverina niaraka tamin'ny sary vitsivitsy nalefany tao amin'ny bilaoginy.
Maneho taratra ny toetra ankapobeny ny lohataona sy ny vokany, mitondra ny lohahevitra zipo i Adiamondinsunlight raha nilaza hoe:
Lohataona ao Libanona, ary feno hafaliana sahady noho ny vanin-taona ny foko. Mandritra ny volana amin'ny toetrandro mafàna, saika zipo foana no hanaovako. Tiako ny endriny – ary mazava ho azy, tiako izy mikopakopaka rehefa mandeha.
Tiako ihany koa ny manao zipo eto satria mampahatsiahy ahy resaka sarobidy hafa.
Tahaka izany koa no nataon'i Mirvat tamin'ity lahatsoratra ity raha nampifandray ny lohataona sy ny fitiavana izy:
Satria mamoha am-pahalefahana ny androntsika ny tara-bolamena. Satria mitovy amin'ny fampanantenana voalohany amin'ny fahavaratra, ny hafanana sy ny mahafinaritra ny lohataona menamenatra, toa latsa-pitiavana ny olona rehetra manodidina ahy. Toa latsa-pitiavana ihany koa aho.
Ampy sahady izay ny fitiavana lohataona. Andeha hiresaka zavakanto. Mitondra antsika amin'ny lahatsoratra, amin'ny alalan'ny tari-dalana mandeha dingana mikasika ny fahatratrarana ny sary eto ambany i Ibn Bint Jbeil, hoy izy:
Mikasika ny fandrindràna, ny firaisantsaina sy ny faharetana ny famoronana. Tahaka ny nolazain'ilay profesorako efa maty Dr Gordon Bugbee, “Firaisantsaina Nozarazaraina” izany. Na izany aza, mikasika ny fahatsarana efa misy anaty sy zavaboahary izay mifandray am-piesoana amin'ny estetika marefo sy jeometrika voarefy izany.
Raha tsy leo lahatsoratra lavabe momba ny zavatra matotra ianao, dia mety mitsidika an'i Marxist From Lebanon izay manadihady ny olana ara-poko Libaney.
Raha manadihady ny olana sosialista amin'i Sionisma ny Anarsista Tezitra.
Inona no fifandraisana eo amin'i Asterix, ny Libaney sy ny mpanao politikan'izy ireo? Abu Ali manana valin-teny:
Maharitra ao anatin'ny sain'ny Libaney marobe hatramin'izao ny fitoviana Asterix. Saingy tsy mahita an'i Libanona ho toy ny tanàna kely manohitra ny Arabo intsony izy ireo (na izany aza, maro no mbola tsy nanao izany), ny sektan'izy ireo no natao fahirano sy notoherin’ …ny sekta hafa. Samy manana ny karazana mahery fòny avy ny sekta tsirairay: ho an'ny Maronites marobe, Samir Geagea no niavian'i Asterix, ilay mpiady fahalalahana mendri-kaja, ary i Patriarch Sfeir no azo antoka fa “druide” Getafix. Ho an'ny ankamaroan'ny Shiita, nikambana ho Hasan Nasrallah nandritra ny ady volana Jolay 2006 i Asterix sy Obelix (izany no mahatonga azy manao akanjo mainty mirebareba), taorian'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 20 Martsa, mety hiresaka ny lohateny Asterix Shiita i Nabih Berri.
Izay no mandritra ity herinandro ity. Amin'ny herinandro manaraka indray, mirary lohataona mahafinaritra.